Global Voices teny Malagasy » Sina: Tsy hatahorana ve ny “pastèque mipoaka”? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Jolay 2011 20:04 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Lila
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tontolo_iainana
Volana vitsy lasa izay dia nilaza ny olana iainan'ireo mpamboly ao amin'ny faritanin'ny Jiangsu ny media sinoa, olana izay nilazan'izy ireo fa mipoaka ny pastèque amboleny vokatry ny fampiasana zezika sy akora simika tsy an-kiato. Tamin'ny 5 jolay 2011, nanamarina  ny minisiteran'ny fambolena fa ny akora ampiasaina hampitomboana haingana ny pastèque dia tsy ahitana olana na dia kely aza satria kely fotsiny ny fako simika misy poizina avelany.
Nilaza koa ity minisitera ity fa hiteraka fahavoazana goavana ho an'ny tontolon'ny fambolena ny tsy fahazoana mampiasa akora simika hampitomboana haingana ny vokatra.
Pasteques mipoaka hita any atsinanan'i Shina
Araka ny voalazan'i Hutong tao amin'ny lahatsorany  [zh], mipoaka ohatry ny baolina eny an-tanimboly ny pastèque. Ny akora simika nampiasaina hampitomboana haingana ny fambolena azy dia ny Forchlorfenuron , izay ara_dalàna ihany koa any Etazonia. Ary satria mampalemy ny voankazo izy ity dia tsy maintsy ampiarahana amin'ny akora simika hafa manome loko sy manamafy ny voankazo.
Indro ny famintinana ny fanadihadihana navoakan'i Caijing tao amin'ny Weibo  [zh]:
[Minisiteran'ny fambolena: tsy atahorana ny akora simika hanafainganana ny fitombon'ny pastèque ary kely fotsiny ny fako simika avelany] Tamin'ny 5 jolay, nitondra valiny ofisialy mahakasika ny “tranga niseho vokatry ny fampiasana akora simika fanafainganana ny fitombon'ny pastèque” ny solontenan'ny minisiteran'ny fambolena. Tao amin'ny fanadihadihana nataony no nanamarinany fa kely fotsiny ny fako simika aterak'ity fanafainganana ity. Raha manaja tsara ny fatra tokony hampiasaina ny mpamboly dia tsy misy tokony hatahorana eo amin'ny ara-tsakafo. Raha foanana tsy azo ampiasaina intsony ity fampitomboana ity dia ny tontolon'ny fambolena amin'ny ankapobeny mihitsy no ho sahirana. Fanadihadihadihana amin'ny antsipiriany hita ao amin'ny http://t.cn/apCbAA  [zh]
Tsy manome toky ny mpanjifa mihitsy ity fanambarana am-pahibemaso nataon'ny minisitera ity. Ny mifanohitra amin'izay aza, sorena amin'ny tsy fahampian'ny fanarahan-dalàna mikasika ny fanampiana zavatra hafa any amin'ny pastèque ny olona.
Pastèque feno akora plastika
Ny tena mahatsiravina nitranga farany izao dia ny nahitana akora plastika tany anaty pastèque tany Jinan. Indreto ny ampahany amin'ny fanehoana izany pastèque izany tamin'ny fahitalavitra:
Ankoatra izay, mitsikera ny tsy fandraisana andraikitra eo anivon'ny minisiteran'ny fambolena ny mpiserasera namaky ny fanambarana nataon'ny minisiteran'ny fambolena. Indreto ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra navoaka tao amin'ny andiam-baovao  [zh] tao amin'ny Sina Weibo:
@焦然blog: Tsy miraharaha olana hafa ankoatra ny famokarana ny minisiteran'ny fambolena. Tena resaka ambony latabatra fotsiny izany. Ny sakafo “azo antoka” araka ny famaritana nataonareo dia ho tonga any an-kibonareo ihany no hiafarany. (6 jolay 13:53)
@DQ肥龙: Tena xxx mihitsy ny fanjakana aty amintsika. Raha raisina amin'ny antsipiriany ny fanambarana nataony dia hita fa azo antoka ny fanapoizinana, fa ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia ny fatran'ny poizina ao anatiny. Tsy mikendry ny hamahana ny olana ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety fa natao kosa hiarovana ny famokarana. Ambony lavitra mihoatra noho ny fahazoan'antoka ny sakafo hohanina ny fahabetsahan'ny vokatra. Tsy azon'iza n'iza atao ny mamotika ny famokarana , dia izay izany. (6 jolay 13:48)
@林川-大脚八: Ny tiako ho fantatra fotsiny dia inona no sakafo fihinana isan'andro tsy ahitana akora simika? Akora simika kely fotsiny any anaty pastèque, any anaty ovy, anaty kisoa, trondro sy makamba, any amin'ny akoho sy ny gana, tsy hiandrona ao anatintsika ao ihany ve izany amin'ny farany? (6 jolay 12:37)
@人民视点: Tsy mitovy amin'ny fampitomboana fampiasa amin'ny biby no fampiasa amin'ny zava-maniry. Tsy misy tokony hatahorana. Na izany aza tsy manana antoka ny amin'ny fatra nampiasain'ny mpamboly ny fanjakana. Izay no tena olana. (6 jolay 11:28)
@苏格拉秀: Hidiran-doza ve ny fambolena raha tsy ampiasaina intsony ny fanafainganana ny fampitomboana ny vokatra? Zava-dehibe noho ny masoandro sy ny rano ve izany ireo akora simika ireo? Mandehana any ry minisiteran'ny fambolena!! Ny vokatry ny fambolena tena natoraly no ilainay! (6 jolay 11:20)
@gloria98:Tsy mino ny fanjakana sy ny manam-pahaizana intsony ny olona… (July 6 11:03)
@小武yeah: namerina namoaka ity hafatra ity: Mafy tsara izao ny vavonin'ny Sinoa. Afaka mihinana ny zavatra rehetra, tsy raharahan'ny fanjakana izany! (6 jolay 10:21)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/07/12/19598/